Home News Al Shabaab oo Amaro Horleh Ku Xiray Garoomo Ku Yaala Xaafadaha Ugu...
Al Shabaab oo Amaro Horleh Ku Xiray Garoomo Ku Yaala Xaafadaha Ugu Muhimsan ee Muqdisho
Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho aya shegaya in kooxda Al Shabab ay awaamir horleh ay dul dhigeyn Garoomada Kubada lagu ciyaaro ee Muqdisho ku yaala.
Warar soo baxaya aya shegaya in kooxda al shabab ay amar ku siyeen milkiilaayaasha Garomo ku yaala wadada Maka Al Mukarama oo ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee cassimada Muqdisho.
Milkilayashan aya la shegay in la faray in ay xiran Garomada Fuutsalka oo si weyn Muqdisho ugu bahayay mudoyinki danbe waxana kooxdan ay talifono ku amren milkilayasha Garomadasi.
Al shabab aya dhawan Garoomo badan ka xiray degmoyinka karan,Yaaqshiid,Hilwa,Deyniile inkasto la shegay in dib lo furay marki ay wada hadleyn milkilayasha Garomadasi iyo Kooxdasi si lacago Canshuur ah ay u bixiyan bishiiba.
Dadka ku dhaqan Muqdisho aya shegaya in arinkan ay tahaymid laga naxo madama ay al shabaab mamulayan Melaha ugu muhimsan ee Muqdisho.
Al-Shabaab ayaa Sido kale gebi ahaanba xiray Garoomadii lagu ciyari jiray Kubada Cagta ee deegaanada Ceelasha Biyaha, Lafoole iyo deegaano kale kadib amarada ay soo saareen.